China DICHLOROMETHANE / METHYLENE CHLORIDE ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | CHEM-IWU
Chemical usoro: CH2Cl2
Nọmba nnweta CAS: 75-09-2
Nkọwapụta / Ọcha: 99.95% min
AHA AHOD: METHYLENE CHLORIDE
Molekụla usoro nke dichloromethane: CH2Cl2; Ọ bụ ihe na-enweghị ike ịgbagha agbaze ya na obere esi mmiri ma na-ejikarị dochie mmanụ ọkụ, diethyl ether, wdg.
Chinese aha: dichloromethane
Molekụla ibu: 84.93
Ebe esi: 39.8 ℃
Mmiri mmiri: 20g / L (20 ℃)
Ọdịdị: colorless na transperent obodo mmiri mmiri
Mbukota: 270KGS acha anụnụ anụnụ ígwè ； 20'fcl: 80drums
EINECS Mba.: 200-838-9
Solubleness: anaghị edozi na mmiri na solol na phenol, aldehyde, ketone, glacial acetic acid, triethyl phosphate, ethyl acetoacetate, na cyclohexane; agwakọta ma gbasaa na mmiri ọgwụ ndị ọzọ nke chlorine hydrocarbon ethyl mmanya, diethyl ether, na N, N-dimethylformamide;
Kwụsi ike: Na ọnọdụ okpomọkụ nkịtị (ime ụlọ) yana mgbe enweghị mmiri, dichloromethane na-akwụsi ike karịa ihe ndị yiri ya (chloroform na carbon tetrachloride);
Mbibi na-ebibi ihe: Ọ bụrụ na kọntaktị mmiri ruo ogologo oge, ọ ga-eji nwayọ nwayọ ma mepụta hydrogen chloride;
Polymerization dị ize ndụ: agaghị eme
Nzube nke dichloromethane:
Dichloromethane nwere oke ike nke mgbasa ma ọ dị obere nsị; a na-etinyekarị ya na mmepụta nke ihe nkiri dị mma na Makrolon; fọdụrụ na-eji agbaze ihe mgbaze, metal degreasing gị n'ụlọnga, anwụrụ ọkụ na gas ọgwụ gị n'ụlọnga, polyurethane ịfụ ụlọnga, tọhapụ gị n'ụlọnga na agba remover;
Dichloromethane bụ mmiri na-enweghị ntụ. A na-eji ya dị ka onye na-emeghachi omume na ụlọ ahịa ọgwụ na-etinye aka na nkwadebe nke penbritin, carbenicillin, cephalosporin, wdg, na ihe mgbaze maka imepụta ihe nkiri, ihe mgbaze mmanụ dewaxing, aerosol propellant, ihe na-emepụta ihe na-emepụta ọgwụ, polyurethane na ndị ọrụ ụfụfụ ndị ọzọ na onye na-ehicha ọla n'oge a na-emepụta plastik foamed.
Nke gara aga: BENZALKONIUM CHLORIDE
Osote: SODIUM DICHLOROISOYANURATE / SDIC